यी तीन कारण पढेपछि तपाई पनि नयाँ कपडा धुन थाल्नुहुन्छ « Janata Samachar
काठमाडौं । अहिले दशैंको महोल छ । दशै आउने वित्तिकै नयाँ कपडा किन्ने र चिटिक्क बन्ने चाहना धेरैको हुन्छ । यो नेपाली संस्कृति नै बनिसकेको छ ।
नयाँ कपडा किन्ने वित्तिकै रमाएर लगाइहाल्ने अधिकांशको बानी हुन्छ ।
यदि तपाई नयाँ कपडा किनेर नधोइकन प्रयोग गर्ने गर्नुभएको छ भने तपाईलाई विभिन्न छाला सम्बन्धी समस्याहरु आउन सक्छ । तर तपाईलाई लाग्न सक्छ कि नयाँ कपडा त सफा र सुकिलो हुने गर्छ , फेरि कसरी छालासंग सम्बन्धित समस्या आउन सक्छ ? आउनुहोस्, जानौ नयाँ कपडा धोएर लगाउनु पर्ने कारण :
१. नयाँ कपडामा किटाणु हुन सक्छ :
विशेषज्ञहरुका अनुसार जुन कपडा हामी किनेर ल्याउछौँ त्यसमा विभिन्न किटाणुहरु टाँसिएर रहेको हुन सक्छ । किनकी त्यो कपडा कहाँ बनेको र कस्तो ठाँउमा राखेर बनाइएको छ ? त्यसमा निर्भर रहन्छ । आँखाले नदेख्ने किटाणुहरु यसरी नयाँ कपडा हुदै हाम्रो शरीरमा समेत सर्न सक्ने भएकोले कपडा किनेपछि धोएर लगाउने गर्नुपर्छ ।
२. पहिला नै पसलमा धेरैले ट्राइ गरेको हुन सक्छ :
कपडा किन्नु अघि हामी सुहाउने नसुहाउने र फिट हुने नहुने थाहा पाउन कपडा ट्राइ गर्ने गर्छौ । यसरी नै अरु थुप्रै जनाले ट्राइ गरेको हुन सक्छ । ती व्यक्तिहरुमा पसिना गन्हाउने र छालासंग सम्बन्धित समस्याहरु हुन सक्छन् । कपडा नधोइकन लगाउदा त्यहि समस्या हामीमा पनि सर्न सक्छ ।
३. कपडा बनाउदा प्रयोग हुने केमिकलले असर पार्न सक्छ :
आजकाल कपडामा विभिन्न रंगाई, छपाई र डाई गर्नका लागि कपडामा विभिन्न केमिकलको प्रयोग गरिन्छ । यसले कपडालाई आकर्षक बनाउने गर्छ । तर कपडा नधोइकन प्रयोग गर्दा ती केमिकलको प्रत्यक्ष असर हाम्रो छालामा पर्न सक्छ ।
एजेन्सी । फेसबुक,ट्वीटर,इन्टाग्राम र टिकटक लगायतका सामाजिक सञ्जाल अहिले धेरैका लागि लत नै बनिसकेको छ